5-sano Fiisaha e-Dalxiiska | Fiisaha tooska ah ee Hindiya
5 Sano Dalxiis E-Dalxiis
Muwaadiniinta ajnabiga ah ee doonaya inay u booqdaan Hindiya indha indheyn ama madadaalo, booqashooyin aan caadi aheyn oo ay kula kulmaan asxaabta iyo qoyska ama barnaamijka Yoga muddada gaaban waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan 5 sano oo Visa E-Tourist Visa ah.
Hay’adda Socdaalka Hindiya ayaa dib u habayn ku samaysay siyaasadooda fiisaha dalxiiska e-Tourist laga bilaabo Sebtember 2019. Si loo xaqiijiyo ra’iisul wasaaraha Narendra Modi aragtidiisa ah in la labanlaabo tirada dalxiisayaasha imanaya Hindiya, gudaha iyo dibaddaba 5 sano gudahood, wasiirka dalxiiska Prahlad Singh Patel ayaa ku dhawaaqay isbeddellada ku yimaadda Visa Online-ka Hindiya. Wasiirka ayaa ku nuux nuuxsaday waxaan u baahanahay inaan badalno aragtida dalxiisayaasha ajaanibta ah ee imanaya Hindiya oo aan ka wada shaqeyno taas.
Markaa laga bilaabo Sebtember 2019, Visa-Dalxiis Dalxiis oo Hindi ah oo muddo 5 sano ah (e-Visa Hindiya) ayaa hadda loo heli karaa dalxiisayaasha ajaanibta ah ee doonaya inay booqdaan Hindiya dhowr jeer muddo 5 sano ah.
Fiisaha dalxiiska elektarooniga ah ayaa hadda lagu heli karaa qaybaha soo socda:
Fiisaha e-Dalxiiska 30 maalmood: Fiisaha gelitaanka laba-laabashada ah oo shaqeynaya 30 maalmood laga bilaabo taariikhda soo gelitaanka Hindiya.
Fiisaha elektaroonigga ah ee Dalxiiska ee 1 Sano (ama 365 maalmood): Fiiso galitaan badan oo ansax ah 365 maalmood laga bilaabo taariikhda deeqda e-Visa.
Fiisaha e-Dalxiiska ee 5 Sano (ama 60 bilood): Fiiso galitaan badan oo ansax ah 5 sano laga bilaabo taariikhda deeqda e-Visa.
Dhammaan fiisooyinka aan kor ku soo sheegnay waa kuwo aan la dheereyn karin oo aan la beddeli karin. Haddii aad codsatay oo aad bixisay Fiiso Dalxiis oo 1 sano ah, markaa markaa ma beddeli kartid ama kor uma qaadi kartid fiisaha 5-ta sano ah.
Ogaysiiska Joogitaanka Fiisaha e-Dalxiiska 5 Sannadood
Joogitaan joogto ah inta lagu jiro midkiiba booqashadu kama badnaan karto 90 maalmood jinsiyad kasta, marka laga reebo muwaadiniinta USA, UK, Canada iyo Japan.
Kuwa haysta baasaboorka Mareykanka, Ingiriiska, Kanada iyo Jabbaan ka joogitaanka joogtada ah inta lagu jiro gelitaan kasta waa inuusan ka badnaan 180 maalmood.
5 sano Visa-dalxiis e-dalxiis waxaa badanaa la soo siiyaa 96 saacadood. Si kastaba ha noqotee waxaa lagugula talinayaa inaad dalbato 7 maalmood kahor safarkaaga.
Codso Visa Dalxiiska Hindiya
Maxaa loo isticmaali karaa Visa-ha Dalxiiska Dalxiis ee 5-ka Sano ah?
Hindiya dal-ku-galka e-dalxiiska waxaa la siiyaa kuwa doonaya inay u safraan Hindiya 1 ama in ka badan sababaha soo socda:
Safarku waa madadaalo ama indho indheyn
Safarka waxaa loogu talagalay booqashada asxaabta, qoyska ama qaraabada
Safarku waa inuu kaqeyb galo barnaamijka yoga muddada-gaaban
Akhri wax dheeraad ah Dalxiiska e-Visa ee Hindiya
Maxay yihiin shuruudaha lagama maarmaanka u ah helitaanka Visa-ha Dalxiiska Dalxiis ee 5 sano ah?
Shuruudaha aasaasiga ah ee Visa-ha Dalxiiska E-Dalxiis ee 5 sano ee Hindiya waa:
Baasaboor shaqeynaya ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo taariikhda imaatinka koowaad ee Hindiya.
Qaab ansax ah oo lacag bixinta ah sida kaarka bangiga / kaarka deynta (Visa, MasterCard, Amex iwm), UnionPay ama Account Paypal ah.
Halkan guji si aad wax uga ogaato Shuruudaha Dukumiintiyada elektarooniga ah ee fiisaha elektarooniga ah.